Sodana: Miteny ao amin’ny Horonantsary ny mpandripa-bahoaka ao Darforo. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2009 7:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
Mampiseho ny fijoroana vavolombelon’ireo lehilahy efatra milaza fa nandray anjara tamin’ny herisetra sy famonoana tao Darforo ny horonantsary navoakan’ i Aegis Trust, ary tsy matahotra akory ry zareo milaza fa fandringanana ireny. Natsofoka tao amin’ny zotra The Hub ny horonantsary ary antenaina fa hanipy izany any amin’ny hafa ny olona mba hanaparitahana ny antontam-baovao.
Efa misy ny dikan-teny an-tsoratra alemana , Arabo, ary Frantsay ao anatin’ny horonantsary.
Araka ny feon-gazetin’ny Aegis Trust momba ny Zon’olombeloha, dia tokony ho entina eny amin’ny Fanapahan-kevitry ny fitsarana iraisam-pirenena mahakasika ny heloka be vava ity horonantsary ity mba hanome ny antoka fahafahana misambotra ny filohan’ny Sodana, Andriamatoa Jeneraly Omar al-Bashir:
Simba I Darforo: niala tamin’ny fahanginany ny tompon’andraikitra Sodana tamin’ny alalan’ny Aegis Trust ao amin’ny Vimeo..